Fivoriana SKÅL mivantana sy mivantana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fivoriana SKÅL mivantana sy mivantana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nandritra ny diako mitsangatsangana any Krabi sy Phuket dia nanam-bintana aho nanatrika Skal fivoriana any amin'ny tanàna roa. Amin'ny maha filohan'ny SKÅL Bangkok fotoana tsara foana hijerena ireo klioban'ny rahavaviko any Thailandy.
Maneran-tany dia manana klioba 345 any amin'ny firenena 104 isika. Nisolo tena ny SK representedL eo an-toerana, eo amin'ny sehatry ny firenena ary ny isam-paritra, ary voninahitra ho ahy ny mitafy satroka 3 amin'ny tontolon'ny SKÅL amin'ny maha VP ahy amin'ny SKÅL Thailand sy SKÅL Asia.
Ny fivoriana tany Krabi dia natao tamin'ny 29 Jolay 2020, tao amin'ny Anana Ecological Resort.
Natolotra ho fivoriana natokana ho an'ny sakafo hariva any Krabi "SOS" nataon'ny tompona trano fandraisam-bahiny sy ny filoham-pirenena Wolfgang Grimm ny hafatra SOS (fanahinny fizarana) ary ny fihaonana dia hiresaka ny fomba ahafahanao mpamily mavitrika ny vondrom-piarahamonina fizahan-tany any an-toerana ary amin'izao fotoana tsy mbola nisy toy izany dia mamorona vaovao sy paikady samihafa hahatonga ny asantsika sy ny vondrom-piarahamonintsika ho maharitra kokoa amin'ny tontolo COVID-19.
Ny mpandahateny vahiny dia i Kevin Rautenbach Snr VP SKÅL Thailand izay nanolotra ny Destination Krabi Domain mba hampiroborobo ny vokatra hotely fitsangatsanganana sy ny fizahan-tany karbaona tsara indrindra any amin'ny toerana itodiana. Ny sehatra fizarana sy famandrihana dia homen'ny Traveliko OTA maimaimpoana. Ny sarany indray mandeha amin'ny tranokala sy serivisy vaovao dia natolotra nandritra ny fivoriana. Maimaimpoana ny famandrihan'ny mpitantana fantsona rehetra amin'ity tranonkala ity. Nandritra ny fivoriana dia niresaka momba ny tetikasa CSR i Kevin izay miaro ny natiora sy hamahana ny hanoanana any Krabi, ary koa ny hevitra offset karbonika toy ny famoronana zaridaina hydroponic maivana eny an-tampon'ny tampon-trano sy / na mandray anjara amin'ny fambolena / fiarovana ireo ala, honko ary ahidrano miaraka amin'ny fikambanana offset .
Tsy nisokatra tanteraka i Anana tamin'ny andron'ny fivoriana, saingy nahatsapa i Wolfgang fa zava-dehibe ny fihaonantsika mivantana handinihana ny tombotsoan'ny fiaraha-miasa. Nisokatra ho an'ny vahiny andro vitsy taty aoriana ny toeram-pialan-tsasatra ary miasa aorian'ny fanidiana.
Tsy andoavam-bola ny hetsika tamin'ny fanomezana ny sakafo natolotry ny andrim-panjakana Krabi telo; Anana Ecological Resort, Umberto's Italian Cuisine ary Cooper's Kitchen manokana.
Miaraka amin'ny mpanatrika 30 dia isan'ny nifidy ho an'ity tanàna fialantsasatra kely ity! Nanana fifampiresahana 2 fomba nifanaovanay izay notarihin'ny filoham-pirenena Wolfgang taorian'ny sakafo hariva momba izay tian'i Krabi Skalleagues hitranga ary nanamafy izy ireo tamin'ny fikasan'ny klioba hahatonga an'i Krabi ho toeram-pialan-tsasatra ekôpourism no.1 any Thailand aorian'ny VP Fampisehoana tena tsara nataon'i Kevin Rautenbach momba ny Marketing Destination.
Skalleagues roa nandritra ny harivariva no nanolotra tafo fisaka sy velaran-tany 2 rai (3200 sqm) ho an'ny fampiasan'ny SKÅL Krabi ho an'ny tetik'asa mahaliana ara-tontolo iainana. Afaka mamadika ny toerana tsy ampiasaina ho faritra ho an'ireo tetik'asa eo amin'ny fiarahamonina azo ampiasaina indray toa ny fambolena, anisan'izany ny lanja fihinana.
Hoy ny filoha Wolfgang: “Alina mahafinaritra erỳ. Vokatra tsara inona. Nanangana hevitra izahay hijerena ny fiompiana momba ny fizahan-tany miaraka amin'ny Community Farming amin'ny tampon-trano ao amin'ny tanànan'i Krabi sy ny tany Klong Muang izay nomena maimaim-poana.
"Amazing! Mpikambana roa avy hatrany no nanolo-tena an-tsitrapo ny fananany hanombohana ity tetik'asa lehibe ity. ”
Ny toerana dia ny InterContinental Phuket Resort mahavariana ho an'ny AGM SKÅL Phuket's tamin'ny 6 Aogositra 2020, tamin'ny 1545 ora sy tamin'ny 1800 ora ho an'ny sakafo hariva.
Nihoatra ny kôngregasiôna mpikambana 25% ny SKÅL Phuket AGM nosokafana niaraka tamin'ny filoha mpisolo toerana Robert De Graaf tamin'ny alàlan'ny fandraisana azy rehetra tamin'ny fivoriana ka anisan'izany ny mpikambana mpanorina Methee Tanmanatragul sy ny fitsidihana ny filoham-pirenena Skalleague AJ Wood avy any Bangkok.
Ny fialantsiny dia noraisina avy amin'ny filohan'ny SK InternationalL International Thailand Wolfgang Grimm.
Tamin'ny kabary fanokafana nataony dia nanonona ny fisaorana manokana nataony ny filoha teo aloha Richard Valentine izay salama tsara.
Noho ny fanafoanana ny Konferansa SKÅL Asia izay namboarina tamin'ny volana Jona tamin'ity taona ity, dia nijanona niaraka tamin'ny ankamaroan'ny indostrian'ny fizahantany nosy taorian'ny fihenan'ny COVID-19.
Robert dia nisaotra ny Phuket Exco tamin'ny asa mafy nataony nandritra ny taona nisavorovoroana ho an'ny fizahan-tany manerantany.
Ny tatitra dia natolotry ny mpikambana ao amin'ny komity narahin'ny fifidianana ny birao mpitantana vaovao 2020-22:
Filoha - Robert de Graaff
Sekretera - François Laing
Mpitahiry vola - Kevin Rautenbach
Young Skål - Ben Tabateau
Ny fandraisana anjara tsara aorian'izany teo amin'ny morontsiraky ny Resort ho an'ny cocktail tambajotra isam-bolana miaraka amina mpanatrika 40-50 pax dia tena nahaliana tokoa.
Ny Bangkok Club dia hanana ny fivoriana manaraka (fiaraha-misakafo amin'ny cocktail) amin'ny talata 11 aogositra 2020, amin'ny 1730 ora ao amin'ny hotely Riva Surya.